यस्ता छन् माछा खाँदाका फाइदै फाइद, कुन रोगीलाई कति फाइदा ? - Seto Khabar
यस्ता छन् माछा खाँदाका फाइदै फाइद, कुन रोगीलाई कति फाइदा ?
२१ मंसिर २०७७, आईतवार ११:४४
काठमाण्डौँ । हामीकहाँ व्यवसायिक माछा पालन गरिएको छ, जहाँबाट बजारमा माछा आपूर्ति हुन्छ । ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भने, मरेको माछा जसलाई ताजा राख्नका लागि केही हानिकारक रसायनको प्रयोग गरिन्छ, त्यस्ता माछा सेवन गर्नुहुँदैन ।
यसैगरी प्याकेट बन्द माछा वा फ्रोजन माछा पनि त्यती उपयोगी हुँदैन ।
डिप्रेसनको अवस्थामा पनि माछा सेवन निकै फाइदाजनक हुन्छ । गर्भवती महिलाहरु अक्सर डिप्रेसनमा जाने संभावना हुन्छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरुलाई चिकित्सकले ओमेगा थ्रि क्याप्सुल खान सल्लाह दिन्छन् । यदि महिलाहरुले नियमित रुपमा माछा सेवन गर्ने हो भने उनीहरुलाई यस्तो चक्कीको आवश्यक्ता पर्दैन ।
रोग अनुसारको खाना ब्यबस्थापन, कुन रोगीले के ? खाने के नखाने ?
कोरोना संक्रमितलाई पछिसम्म पनि फोक्सोमा असर गरिरहने अनुसन्धाबाट पत्ता लाग्यो